Ron Paul sharciyeeyaa Seeraar
Congressman hore ee Jamhuuriga Ron Paul ayaa sheegay in uu yahay oo dhan Seeraar sida lacagta kale, ilaa iyo inta wax walba oo ku saabsan muranka ka, hantida dalwaddii waa sharci.
Congressman hore ee Jamhuuriga ka Texas oo dhawaan lagu Waaniyo CNN in markii uu ku jiray Congress, wuxuu soo bandhigay sharci in ay oggolaadaan in lacagaha tartamaya maxaa yeelay, wuxuu neceb yahay nidaamka hadda.
"Anigu waan karhay nidaamka ah in aan wax. The counterfeiters rasmi ah ugu jira Reserve Federaalka. Taasi waa misstep weyn iyo dhibaato weyn. Sidaas daraaddeed dadkii waxay xaq u leeyihiin in ay doortaan,"Insider Newsmax wuxuu leeyahay.
"Waxay markii hore sameeyey markii lacagtii bilaabay. Kolkaasay waxay ku soo gaaray dahab iyo lacag. Iyo xukuumadda ayaa ka badan qaatay oo si xun in caadiga ah iyo waxaa Iska Baraxay. Oo waxaa wada baabbi'iyey dalka this,"Bawlosna wuxuu ku yidhi.
"Waxaan doonayaa inaan sharciyeeyaa oo dhan of fursadaha kuwa iyo waxa ay dadka rabto in aad isticmaasho sida lacag. Laakiin musuqmaasuq lahayn. Inaanad karaa musuqmaasuq,"Libertarian Texas u sheegay CNN ee Michael Smerconish.
Ron Paul waa ladan, qoraa, iyo Congressman hore ee Jamhuuriga. Paul ayaa sidoo kale musharaxa madaxwaynanimada ee Jamhuuriga laba-time ah, iyo magacaabista Madaxweynaha ee Xisbiga Libertarian ee 1988 xoreeyo. doorashada madaxtinimada.
ViaBTC ku dhow in ay suuqa for qandaraasyada macdan
pool macdanta Seeraar Chinese ViaBTC ayaa ku dhawaaqay in la xiri doono ay suuqa for heshiisyada macdanta Isbuucaan, dhaqaaqo timaada iyadoo lagu soo waramayo cusub oo ganaax ah oo ay mas'uuliyiinta dalka.
In Jan a. 8 qoraal, ViaBTC sheegay in ay hoos u xidhay lahaa suuqa - kaas oo isticmaala iibsan kartaa heshiis ku heli karaan xaddi gaar ah oo awood ahato (iyo lamoodaa cryptocurrency la xiriira) - waa Jan. 10. Sababta: shirkadda ayaa doonaya inuu “xakameeyo isla dhexmarayo iyo ilaalinta danaha maal our.”
“Fadlan ku dhameysan oo dhan ganacsi aad heshiis macdan daruur ugu dhaqso badan. aad oo dhan ku mahadsan tahay taageerada,” ViaBTC daray.
ViaBTC ugu horeysay bilaabay adeegga macdanta daruur ay ka November 2016.
Xidhitaanka yimaado bilood ka dib ViaBTC xidho sarrifka ay cryptocurrency jawaab u ah howlgalka masuuliyiinta Chinese on ecosystem sarrifka ee dalka, geedi socod bilaabay ka dib bilowgii 2016. Saraakiisha ayaa sidoo kale u dhaqaaqay mamnuucayo isticmaalka qurbaannada qadaadiic hore (ICOs) September.
Oo weliba halka ay jiraan wax caddaymo ah oo cad in labada dhacdooyin waa la xiriira, ogeysiis ugu dambeeyey ee soo socota warar cusub oo ka tirsan dalka China ayaa raadineysa xiritaanka tartiib tartiib ah ee hawlaha macdanta Seeraar qoyska.
Sida ku qoran xaashiyo laga siidaayey ka badan todobaadkan oo loo aaneeyey inay u Group ee hormoodka ah ee Internet Financial Khatarta · Dhaqan, jaangooyaha a Chinese, Saraakiisha rabto in aad loo yareeyo taageero macdan qodayaasha degaanka, baaqaya tallaabooyin agagaarka xoog iyo dhulka loo isticmaalo. Mid ka mid ah waraaqaha ka codsaday in saraakiisha diyaariyo qorshe nidaamka noocan oo kale ah ay 10-.
Wakiil ka socda xafiiska Xinjiang hay'adda ayaa xaqiijiyay muujiyay waraaqo si ay u quartz laakiin may sheegin faahfaahin intaas.
Sida dheeraad ah lagu muujiyey by Bloomberg, macdan qodayaasha ee Shiinaha ayaa la wareegaayo ay raad ka dalka ka eryin, isha goobaha cusub ee Europe iyo North America. adeeg news ayaa sheegay in saraakiisha Shiinaha rabto in aad soo saaraya ah “habsami” Minneosta ee deegaanka macdanta.
10 isbeddellada horumarinta warshadaha crypto ee 2018
Khubaro ka ELE The ...
Yuu yahay John Hyman, ama waxa aan ogaado oo ku saabsan la taliyaha maalgashiga telegraam
fariin lo ...
Bithumb dhigay $ 35 milyan Pr ...
Post Previous:About ICO: Yaa ururiyay lacag badan inta lagu jiro iibka calaamo
Post Next:qorshayaasha telegraam ICO